सन्सारलाई चकित पार्दै बाहिरियो यस्तो रहस्य? यी हुन् श्रीमतिको साटो गर्भाधान गर्ने पुरुष – Sandesh Press
सन्सारलाई चकित पार्दै बाहिरियो यस्तो रहस्य? यी हुन् श्रीमतिको साटो गर्भाधान गर्ने पुरुष
July 26, 2021 353
सन्सार बिचित्र मानिसहरुका कारण पनि रमाइलो छ । किसिम किसिमका मानिसले यो सन्सारलाई आफ्ना अनौठा कार्यहरुद्धारा बेला बेलामा मनोरञ्जन दिने गर्दछन् । यस्तै एक घटना प्रकाशमा आएको छ जहाँ एक गर्भाधान गरेका पुरुषले आफ्ना तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका तस्वीरले इन्टरनेटमा सबैलाई रमाइलो भएको छ । मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा ती पुरुषले पोष्ट गरेको तस्वीरमा थरी थरीका कमेन्ट गरेका छन् । जति पनि कमेन्ट छन् ती सबै गर्भाधान गरेका मानिसको हास्य रसको प्रशंसा गरिएका छन् ।
उनले आफूले गर्भाधान गरेको फोटो खिचाउनुको कारण झन अनौठो छ । यसको कारण भने उनकी श्रीमति हुन् । उनकी श्रीमतिले गर्भवती भएको फोटो खिच्न अस्वीकार गरिन् । श्रीमतिले फोटो खिच्न अस्वीकार गरेपछि उनले आफैं फोटो खिचाएका हुन् ।
बास्तवमा यी पुरुषले गर्भाधान गरेका होइनन् । उनको उक्सिएको पेट बो सो मात्र हो । गर्भवति भने उनकी श्रीमति हुन् । श्रीमति गर्भवति भएपछि उनले एक फोटोग्राफर बोलाएका थिए । यसमा श्रीमतिको पनि स्वीकृति थियो । फोटोग्राफरलाई उनले पैसा पनि दिइसकेका थिए ।
फोटोग्राफर आईसकेपछि श्रीमतिले फोटो खिच्न मानिनन् । उनले मनाउने कोशिस गरे तर त्यो सार्थक भएन । फोटोग्राफरले पैसा फिर्ता दिन पनि मानेन । उनले अन्तिम बिकल्प यही देखे । आफैं गर्भाधान गरेको जस्तो स्वरुप बनाउने र फोटो खिचाउने । यसो गरेपछि पैसा पनि असुल हुनेभयो ।
उनले खिचाएका फोटोहरु पछि इन्टररनेटमा अपलोड गरे । यस्ता तस्वीर एकैछिनमा भाइरल भए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ त यिनै निक रोवर्टस् भन्ने पुरुषको चर्चा छ । यी तस्वीरहरु भने मार्दिन विकिज फाटोग्राफीद्धारा खिचिएका तस्वीर हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध तस्वीरहरु हामीले यहाँ राखेका हौं ।
Prevकरोडौँको गाडी चोर्दै बेच्ने नेपाली सेनाका जवान पक्राउ, चोर्ने तरिका पनि अनौठो
Nextकिन खानुहुँदैन साउनमा माछा मासु, किन व्रत बस्ने
सरकारले घरमा छोरी हुने परिवारलाई निशुल्क दिने भयो यस्तो सुविधा ! यस्ताे कारण?